I-2021 Taizhou Industry Expo (iTIE)
I-Your Like Power (Fuzhou) Co., Ltd yaya kwi-2021 Taizhou Industry Expo (TIE) kwiTaizhou International Convention kunye neZiko leMiboniso ngoJulayi 31 -Agasti 1, 2021. Imiboniso yenkampani yethu ziindawo zokugcina iimoto zecompressors zomoya kunye neemotors ...
Uhlengahlengiso lwe Angle kwangaphambili kwiinjini yedizili yenaliti
Ukuze ufumane umlilo olungileyo, yenza ukuba idizili iqhubeke ngesiqhelo kwaye ifumane olona hlobo lusebenzayo lokusebenzisa umbane, inaliti yangaphambi kwenaliti kufuneka ihlengahlengiswe ...
I-21 yamaTshayina i-Expo yeeMoto zombane kunye neQonga
ngomphathi ku 21-07-06
I-Your Like Power (Fuzhou) Co., Ltd yaya kwi-21th China International Electric Motor Expo kunye neForum eShanghai New International Expo Centre ngoJuni 27-29,2021. 2021 iseshoni yama-21 China ukubonisa ngamazwe kunye nophuhliso zombane BBS yi GUO HAO mboniso (Shanghai) co., LTD., ...
Zithini iziphumo zobushushu obujikelezayo kumandla eseti yedizili yedizili?
Nokuba yeyiphi na into eyenziwe ngohlobo lophawu, ukungenisa ngaphakathi okanye iseti yejenereyitha yasekhaya, ukusebenza kwabo kuya kuchaphazeleka kwimeko yokusebenza. Imiba emithathu yokusingqongileyo, ukuphakama, ubushushu kunye nokufuma, inefuthe elibonakalayo kumbane wenkunkuma yedizili: 1.Altitude. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwedizili ...
Uhlalutyo lokusilela kunye nesisombululo soxinzelelo lweoyile ye-injini ye-Diesel sisezantsi
Uhlalutyo lokusilela: A .. Inqanaba leoyile liphantsi kwisampulu yeoyile. B. Umlawuli woxinzelelo lweoyile uqhekeka entwasahlobo; C. Icebo lokucoca ulwelo lwerabha ukhuko lokuguga kokuvuza kweoyile D. Imitha yoxinzelelo lweoyile eyaphukileyo E. Isihluzi seoyile ekuvaleni kwesampu yeoyile. Ukusombulula ingxaki A. Gcina ioyile yesump yeoyile kwisikali esigcweleyo, ngexesha elifanelekileyo ukongeza ioyile B. R ...
Ulawulo lokuvelisa igumbi kunye noxanduva lomqhubi
Inkqubo yolawulo lwegumbi lokuvelisa idizili 1. Okokuqala, umbane kufuneka asebenzise i-generator ngokuchanekileyo ngokwemigaqo yokusebenza, enze umsebenzi olungileyo kulondolozo lwejenreyitha ngesiqhelo, enze irekhodi elilungileyo xa uhlobo olusebenza ngalo lonke ixesha. 2.Check zonke iindawo zejenereyitha, isipholisi, ipetroli ...
Ulwazi ngokubanzi ngokuseta kwejenereyitha yedizili
Amalungiselelo phambi kokuba iyunithi iqale 1. Jonga ukuba inqanaba leoyile yokuthambisa ioyile, isipholisi, kunye nobungakanani bepetroli zikulayini yomlinganiselo omiselweyo naphakathi kuluhlu olumiselweyo. 2, jonga ukubonelelwa kweoyile ye-injini ye-diesel, ukuthambisa, inkqubo yokupholisa yombhobho ngamnye kunye nokudibanisa nokuba ...
Ukuhanjiswa okungaginyiswanga phantsi kwefuthe leCovid-19
Ukuchaphazeleka yi-Covid-19 entsha kwi-2020, amashishini ahlukeneyo asokoliswe ziimpembelelo ezininzi, kwaye iya kuba liliza elibandayo kuqoqosho lwehlabathi, urhwebo kunye nokusetyenziswa ngaphandle kweintanethi. Amashishini amahlanu aphambili anje ngokutya, ezothutho, ezokhenketho kunye nokuthengiswa kwezindlu nomhlaba, kunye nokuthengisa ngaphandle kweintanethi, baya kujongana ...
IBauma China, oomatshini bokwakha bamanye amazwe baseShanghai, oomatshini bezinto zokwakha, oomatshini bokumba umgodi, izithuthi zokwakha kunye nezixhobo zemiboniso, zibanjwa rhoqo emva kweminyaka emibini eShanghai New International Expo Centre. IBauma China liqonga lomboniso lobuchule eAsia kushishino lwe ...
Inkampani yethu yanikezelwa iSatifikethi seShishini esiPhakamileyo seSizwe ngoDisemba 2, 2019.
ngomphathi ku 19-12-02
"Inzululwazi ibalulekile ekuqhubeni izinto zangaphakathi kuphuhliso, igama elithi" ishishini elitsha neliphezulu kwitekhnoloji "libhekisa kumalungelo oshishino ezizimeleyo asisiseko aqhutywa ngophando oluqhubekayo kunye nophuhliso kunye nokuguqulwa kwezinto ...
Wamkelekile uSekela Mongameli weTimor Hleze abathunywa bakhe batyelele inkampani yethu
ngomphathi ku 19-09-10
Nge-10 kaSeptemba, xa umnyhadala weMid-Autumn usondela, usekela-Mongameli weTimor Lest kunye negqiza lakhe batyelele inkampani yethu ukuyokufunda iprojekthi yokusasaza amandla eCCHP kunye netyuwa lamanzi olwandle kunye nemibuliso eyongezelelweyo kubasebenzi bethu. ...
NgoJulayi ka-2017, inkampani yethu yanikwa isiqinisekiso seShishini esikhokelayo seFujian yePhondo yeNzululwazi neTekhnoloji.
ngomphathi ku 17-07-01
Esi satifikethi singqina ukuba inkampani yethu inomsebenzi oqinileyo kunye neqela lolawulo, inkqubo yezemali evakalayo, ukomelela kweemarike, indlela yokukhuthaza inokubakho. Kwaye intsebenzo ilungile, inokubanakho ukukhula kunye nexabiso lokulima kakhulu. Kwinkqubo yophando, phuhlisa ...